I-PUVA-therapy iyindlela ehlukile yokuphatha izifo zesikhumba ezihlukahlukene. Ingqikithi yayo ihlala emthethweni ohlangene esikhumbeni semithi yokwelapha esivela emvelweni (psoralenov (P) kanye nemisebe yelanga ende elula yomswakama we-ultraviolet.
Izinkomba zokwelashwa kwe-PUVA
Ngokuvamile ukuphathwa kwe-PUVA kusetshenziselwa i-psoriasis yezinyawo nezintende zezandla. Le ndlela yokwelapha iphumelela ngokuphumelelayo nalesi sifo, ngisho noma iziguli zihlulekile ukuqhuba izifundo ze-BUF-therapy. Ukwelashwa kwe- psoriasis nge-PUVA-therapy kungenziwa ezimweni lapho umuntu enefomu eline-drop noma eqhubekayo yalesi sifo. Phakathi nezinqubo, ukuphindaphinda kwamaseli okwenza isici sokuqhaqhazela kuvinjelwe ngokuphelele, futhi ekugcineni ukuthuthukiswa kwamacwecwe kumiswe okwesikhashana, futhi ekugcineni kuyanyamalala.
Izinkomba zalendlela yokwelashwa nazo ziyi-atopic dermatitis ne-mushroom mycosis. I-PUVA-therapy nayo inconywa nge-vitiligo. Kuzoba usizo ngisho nalabo abagulayo abanesifo esithintekile ngaphezu kwengu-20-30% yesikhumba.
Ukuphathwa kwe-PUVA akukwenziwa ekhaya. Zonke izinqubo zenziwa kuphela ngesineke (ngeziguli ezivamile noma ezikhethekile zokwelapha izifo zesikhumba). Izidakamizwa ezithathwe ngomlomo, noma ezisetshenzisiwe ngezihloko, futhi ngemva kwamahora angu-2-3 ezithintekile yizindawo zokugula zivezwe emisebeni ye-ultraviolet. Isikhathi se-irradiation siqala imizuzu embalwa, kodwa sikhula ngeseshini ngayinye. Iningi le-PUVA yokwelapha liqukethe izikhathi ezingu-10-30.
Ukuqhathaniswa nokwelashwa kwe-PUVA
I-PUVA-therapy inomsebenzi ophezulu (85%), futhi izimpawu zokuqala zokuguqulwa kwezibonakaliso zesikhumba zibonakala emva kwezinqubo ezingu-4-6. Le ndlela yokwelashwa ibekezelela kahle iziguli futhi ayilona umlutha. Nokho, akuwona wonke umuntu ongayisebenzisa.
Ukuphikisana nokuphathwa kwe-PUVA yilokhu:
hypersensitivity kuya psoralen;
i-lupus erythematosus ;
Ngokucophelela sebenzisa le ndlela ukuze uphathe iziguli ezinesikhumba esilula, izilonda, uremia nokuhluleka kwezinso. Futhi, ungasebenzisi ukwelashwa kwe-PUVA kulabo abaye bacindezeleka, noma kumuntu oye waba nezicubu ezimbi. Izifo ezimbi ze-myocardial nezinye izifo eziningi ezingavumeli isikhathi eside ukuma, kuvame ukuvimbela ukuhamba kwendlela yokwelapha ephelele.
Anaprilin - izinkomba zokusetshenziswa
Iyini injongo ka-Omez, nokuthi ungayithatha kanjani imithi ngendlela efanele?
Imilenze yokuvuvukala kakhulu - yini okufanele uyenze?
I-hernia ye-intervertebral ezinamalini aphansi emuva
Valsartan - ezifanayo
Erysipelas ngezinyawo - izimbangela nezici zokwelapha
I-Lapchatka impande emhlophe - i-Endonorm
Bacteriophages - Species kanye nenjongo
I-Angiography yezimpahla zamaphethelo aphansi
I-Askofen-P - izinkomba zokusetshenziswa kanye nezici zomuthi
Ukudla kukaVasilisa Volodina
Ukuhlobisa igumbi elinemifanekiso emibala emibili
Ngubani igama lika-Alain
Amakhilogremu ayizigidi ezivela e-Emma Watson ukulwa nokuhlukunyezwa
I-NSHA yengane esanda kuzalwa
I-Tigridia - ukufika nokukhathalela emhlabathini ovulekile
Izindlela ezingu-25 zokuhlukunyezwa ezokudabuka!
Amanzi alwandle - okuhle nokubi
Ukuqedwa kwenkontileka yomsebenzi
Cutlets ngaphandle kwamaqanda
Kanye West izingubo
I-anyanisi isobho - iresiphi yama-classic
Isithombe ku-prom 2016
Ungasusa kanjani ukuhlasela kwe-arrhythmia ekhaya?
Izithombe zasebusika zamantombazane
I-Chitwan National Park
Ziyini iminyango yangaphakathi?
Isihloko somphetho wengubo yama-mink